Covid 19 နဲ့ အရေးပေါ်ဌာန
Covid 19 ကပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဆေးရုံတွေမှာ ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတယ် ဆိုတာကို ဗြိတိန်အရှေ့တောင်ပိုင်း Essex ဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနက Emergency Medicine လို့ခေါ်တဲ့ အရေးပေါ်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာရှင် ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်းကို မေးမြန်းပြီးတင်ပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“ဒီ ဆေးရုံမှာတော့ Covid ရောဂါစဖြစ်တဲ့ မတ်လ အလယ်လောက် ကတည်းက ၂ ပိုင်း ခွဲလိုက်ပါတယ်။ hot area နဲ့ cold area လို့ ခေါ်ပါတယ်။ hot area ကိုလာတဲ့ လူတွေကတော့ ambulanceအရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်နဲ့ ခေါ်လာကြတာ များပါတယ်။ သူတို့က အဖျားရှိတယ်။ ပြီး ချောင်းတွေ တအားဆိုးမယ်၊ အသက်ရှုကြပ်မယ်၊ လည်ပင်းနာတာ၊ နှာရည် တအားကျနေတာ၊ အသက်ရှုမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ (symptoms) ရှိတဲ့ လူတွေကို ခေါ်လာတာပေါ့နော်။ သူတို့ကိုဆို hot area မှာ ထားပါတယ်။ hot area နဲ့ cold area ကို သပ်သပ်ကို wall ကို နံရံကာပြီး ခွဲလိုက်ရတာပေါ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ cold area မှာ ရှိတဲ့ လူတွေက ချော်လဲတာ လောက်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နှလုံးရောဂါ - heart attack ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ စောစောက လက္ခဏာတွေ မရှိတဲ့ လူတွေကို cold ဧရိယာမှာ ထားတာပါ။ hot နေရာလောက် Covid ရောဂါ သံသယ မရှိလို့ ထားတာာပါ။”
မေး။ ။“ဒီ hot နေရာကို လူနာတွေကို ပို့ပြီ ဆိုရင် ဒီလူနာတွေကို ပထမဆုံး ဘယ်လိုစပြီး ကုပေးပါသလဲ။”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“လူနာရောက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ - အရမ်း ရောဂါ အခြေနေဆိုးနေတယ်၊ ဥပမာ- အောက်ဆီဂျင်အရမ်း နဲနေတယ်၊ အသက်ရှု တအား ကြပ်နေတယ်ဆိုရင် ကျမတို့က ကြိုသိပါတယ်။ ambulance သမားက red phone လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ဖုံး emergency phone ပေါ့နော်။ လှမ်းခေါ်တာပေါ့။ ခေါ်ပြီးတော့ သူတို့က ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပြောပါတယ်။ သွေးဖိအားတို့ နှလုံးခုန်နှုန်းတို့ အောက်ဆီဂျင် အခြေနေ တို့ကို ပြောပြလို့ ရှိရင် ကျမတို့က ကဲ အဲဒီလူနာက တော်တော် ဆိုးနေတယ်။ အသဲအသန် နေရာမှာ ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါဆိုရင် resuscitation area လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အသဲအသန် မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတော့ ပုံမှန် hot ဧရိယာမှာ ပဲ ကြည့်တာပေါ့။
ကျမတို့ကတော့ လူနာစပြီး ရောက်ကတည်းက သွေးဖေါက်တယ်၊ chest x-ray ရင်ပတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်တယ်၊ ပုံမှန်ရိုက်ပါတယ်။ လူနာက blood test သွေးစစ်တာတွေ၊ ရင်ပတ် အိပ်စရေးရိုက်တာတွေက ကောင်းတယ်၊ အောက်ဆီဂျင် level က ကောင်းတယ် ဆိုလို့ရှိရင် antibiotic ပေးပြီး ပြန်လွှတ်ပါတယ်။ မကောင်းဘူး ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဆေးရုံမှာတင်ပါတယ်။ ဆေးရုံ တင်ရင်တော့ medical team ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ကိုပဲ လွှဲလိုက်တာပေါ့။ တန်းပြီးတော့။ သူတို့medical ward က ကိုဗစ် ward လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မသွားခင်မှာ swab ယူပါတယ်။ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲကို swab ယူပါတယ်။”
မေး။. ။“လူနာတယောက် ရောက်လာပြီဆိုရင် ဒီလူနာဟာ ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်နေလား မဖြစ်ဖူးလား ဘယ်လိုလုပ် သိပါသလဲ”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“အတိအကျ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ swab အဖြေမထွက်မချင်း။ အခုတော့ ကျမတို့ သိနိုင်တာ တခုကတော့ လူနာ ရောက်ရောက်ချင်း chest x-ray ဓါတ်မှန် ရိုက်လိုက်လို့ ရှိရင် chest x-ray မှာ ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေက Covid sign လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကျမတို့ သိပါတယ်။ ကျမတို့ ဆေးရုံမှာ radiologist ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူက ၂၄ နာရီ ဂျူတီနဲ့ ဆင်းရပါတယ်။ radiologist က chest x-ray ကို ဖတ်ပြီး အခြေနေကို ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ chest x-ray ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ကျမတို့ လူနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်ကို မှန်းလို့ ရနေပါပြီ။ နောက်ပြီးတော့ သွေးအဖြေ blood result ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ သွေးအဖြေပေါ်မှာ ဘယ်လို မူတည်တာပါလဲ။”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“အဲဒီ သွေးအဖြေမှာabnormalities မူမမှန်တာတွေကို ပြပါတယ်။ အဲဒီ ကိုဗစ်ရှိတဲ့လူနာက။. Lymphopenia လို့ ခေါ်ပါတယ်။ blood count က နဲလို့ရှိရင် အဲဒါက ကိုဗစ်ဖြစ်ဖို့ chance အခွင့်လန်း အရမ်းများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု အချိန်မှာတော့ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချောင်းဆိုးနေတယ်၊ အပူချိန်ရှိနေတယ်၊ အသက်ရှုကြပ်နေတယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ၉ ၀% ကျော်ကတော့ ကိုဗစ်ပါပဲ။ chest x-ray က ကျမတို့ဆီမှာ ၅ မိနစ်အတွင်း အဖြေရပါတယ်။ chest x-ray ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ရောဂါအဖြေရှာလို့ ရပါပြီ။”
မေး။. ။“ဒီကိုဗစ်လူနာ သေချာပြီ ဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ပါသလဲ။”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“လူနာက အောက်ဆီဂျင် လိုနေကြတာများပါတယ်။ အဲဒီတော့ အောက်ဆီဂျင်လိုရင် အောက်ဆီဂျင် ပေးတယ်ပေါ့နော်။ ပြန်နိုင်တဲ့ လူနာကိုတော့ antibiotic ပေးပြီးတော့ မပြန်နိုင်တဲ့လူနာကိုတော့၊ ဒီလူနာဟာ အထူးကြပ်မတ်ဆောင် intensive care ကိုသွားရမယ့် လူနာလား၊ ရိုးရိုး medical ward ထဲမှာပဲ နေနိုင်သလား၊ ဆိုတာ အဲဒီအချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ ခုနကပြောပြတဲ့ resuscitation ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ လူနာကတော့ အရမ်းကိုဆိုးဝါး နေတယ်ဆိုရင် အသက်ရှုစက် တပ်မလား ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရ ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကျလို့ရှိရင် ကျမတို့က Intensive Care Specialists (ICU) တွေကို ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့က လာကြည့်တယ်။ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ သူတို့ decide လုပ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ နေရာမှာ သူတုိ့ကြည့်ရတဲ့ factors အကြောင်းချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လည်ချောင်းထဲကို ပိုက် tube ထည့်မလား။ အသက်ရှုစက်နဲ့ ဆက်မလား ဆိုတာကို ICU က အထူးကု specialists တွေက ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ သူတို့ လုပ်ပါတယ်။ တခါထဲပေါ့နော်။”
မေး။. ။“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယဖြစ်နေတယ်၊ ကိုဗစ် ၁၉ရောဂါ အကူးခံနေရတယ်လို့ သံသယရှိရင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ။”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“ကျမတို့ဆီမှာ 111 ဆိုတဲ့ စံနစ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါက health advise line ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးတဲ့ ဖုံးလိုင်းပေါ့နော်၊ အဲဒီလိုင်းမှာ ဖြေတဲ့လူတွေက ကျန်းမာရေးကုသမှု ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ healthcare professional တွေပေါ့။ များသောအားဖြင့် သူနာပြုတွေ၊ nurse တွေ၊ paramedic တွေ သူတို့ကို သင်တန်းပေးလေ့ကျင့် train လုပ်ထားတာပေါ့။ အဲဒီနံပတ်ကို ခေါ်လိုက်ရင် သူတို့က symptoms တွေ၊ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို မေးပါတယ်။ အကုန်လုံးပေါ့။ အရင်က ဘာရောဂါဖြစ်ဖူးတယ် medical history က အစ၊ ဘာဆေးတွေသောက်ဖူးတယ်၊ drug history ကအစ သူတို့မေးရမယ့် checklist အချက်တွေ အများကြီးပါ။ အဲဒါတွေကို မေးပါတယ်။ မေးပြီးတော့ သူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စဆိုရင် သူတို့ဖာသာ ဆုံးဖြတ်တယ်။ မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်လည်း ခဏနေရင် ဆေးတာဝန်ခံက ပြန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါက GP (General Physician) အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန် ဖြစ်တာများတယ်။ သူကပြန်ခေါ်တယ်။ အဲဒီမှာ GP ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။ နေကောင်းရင်တော့ အိမ်မှာပဲ နေအုံးပေါ့နော်၊ ပါရာစီတမော သောက်ပါ၊ ရေများများ သောက်ပါ၊ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာ၊ ဘယ် sign တွေ၊ symptom တွေ၊ လက္ခဏာတွေ ကြည့် နေရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ နေမကောင်းရင် 999 ခေါ်ရမယ် ဆိုတာ သူတို့က ညွှန်ကြားပေးတာပေါ့။ အဲဒီလို ဆရာဝန်နဲ့ စကား ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ရင်တော့ ဆရာဝန်က ချက်ချင်း လူနာတင်ယာဉ် ambulance လွှတ်လိုက်ပါတယ်။”
မေး။။“အခုပြောတဲ့ 111 နဲ့ 999 ဘာကွာပါလဲ”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“ 111 က non-emergency call ပေါ့နော်။ ဥပမာ လူတယောက်က အခုလိုအချိန်မှာ အပူချိန်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ လည်ချောင်းနာတယ်၊ ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့မှာ အသက်အန္တရာယ် ရှိနေတဲ့ အချိန်မဟုတ်လို့ရှိရင် 111 ကိုခေါ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥပမာ လူတယောက်က အရမ်းကို ရင်ဘတ်အောင့်တယ်ပေါ့နော်၊ နှလုံးရောဂါကြောင့် heart attack ရတယ်လို့ ထင်လို့ရှိရင် အဲဒီလူနာ 999 ကိုခေါ်လို့ ရပါတယ်။ 999 က emergency အရေးပေါ်ပေါ့။ အဲဒီ 999 call က ၃ ခုပြန်ခွဲပါတယ်။ police လိုချင်လား။ ambulance လိုချင်လား၊ မီးသတ်လား အဲလို ထပ်ခွဲပါတယ်။”
မေး။.။“အရေးပေါ်အခန်းတွေကို ကိုင်ရတဲ့ ဆရာဝန်တွေ အနေနဲ့ ရောဂါမကူးအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်တာတွေ လုပ်ပါသလဲ။”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“hot area မှာလာတဲ့ လူတွေကတော့ အကုန်လုံးနီးပါးက နောက်ကျလို့ရှိရင် positive ဖြစ်တာကိုး။ အဲဒီတော့ အကုန်လုံး full PPE ဝတ်ရပါတယ်။ မျက်စိပိုင်းကိုကာတဲ့ မျက်မှန် google ရယ်၊ နှာခေါင်းစည်း mask က FFP3mask လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ surgical gown ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ဝတ်ရုံနဲ့gloves လက်အိတ် ဝတ်ရပါတယ်။ အပေါ်မှာ visor မျက်နှာအကာ တပ်ပါတယ်။”
မေး။.။“မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ သတိထားသင့်ပါသလဲ”
ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း။ ။“မပေါ့ကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒီရောဂါ ကူးပုံက fomites လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်မှာ ပါလာတာကိုး။ ကိုယ်အပြင်ထွက်လေ၊ ကိုယ့်အိမ်ကို သယ်လာလေပဲ။ အဲဒီတော့ တတ်နိုင်သမျှ အိမ်မှာ နေကြဖို့၊ လူကြီးတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားနဲတဲ့ လူတွေ ဥပမာ ဆီးချို ရှိတဲ့လူတွေ၊ နှလုံးရောဂါ အဆုတ်ရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကြပ် ရှိတဲ့လူတွေ၊ ကင်ဆာရှိတဲ့လူတွေက အိမ်ထဲမှာပဲ နေ၊ လုံးဝ အပြင်ကို ထွက်ကို မထွက်သင့်ပါဘူး။ အိမ်သားတွေကလည်း လုံးဝ မထွက်သင့်ပါဘူး။ လူထူတဲ့ နေရာကို မသွားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဗြိတိန်က ဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဒေါက်တာအလိမ္မာဝင်းသိန်း ပါ။
Covid 19 ကပျရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး ဗွိတိနျနိုငျငံက ဆေးရုံတှမှော ဘာတှလေုပျဆောငျနကွေတယျ ဆိုတာကို ဗွိတိနျအရှတေ့ောငျပိုငျး Essex ဆေးရုံ အရေးပျေါဌာနက Emergency Medicine လို့ချေါတဲ့ အရေးပျေါဆိုငျရာ ဆေးပညာရှငျ ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျးကို မေးမွနျးပွီးတငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“ဒီ ဆေးရုံမှာတော့ Covid ရောဂါစဖွဈတဲ့ မတျလ အလယျလောကျ ကတညျးက ၂ ပိုငျး ခှဲလိုကျပါတယျ။ hot area နဲ့ cold area လို့ ချေါပါတယျ။ hot area ကိုလာတဲ့ လူတှကေတော့ ambulance အရေးပျေါလူနာတငျယာဉျနဲ့ ချေါလာကွတာ မြားပါတယျ။ သူတို့က အဖြားရှိတယျ။ ပွီး ခြောငျးတှေ တအားဆိုးမယျ၊ အသကျရှုကွပျမယျ၊ လညျပငျးနာတာ၊ နှာရညျ တအားကနြတော၊ အသကျရှုမကောငျးတဲ့ လက်ခဏာ (symptoms) ရှိတဲ့ လူတှကေို ချေါလာတာပေါ့နျော။ သူတို့ကိုဆို hot area မှာ ထားပါတယျ။ hot area နဲ့ cold area ကို သပျသပျကို wall ကို နံရံကာပွီး ခှဲလိုကျရတာပေါ့။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ cold area မှာ ရှိတဲ့ လူတှကေ ခြျောလဲတာ လောကျလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ နှလုံးရောဂါ - heart attack ရတာလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ စောစောက လက်ခဏာတှေ မရှိတဲ့ လူတှကေို cold ဧရိယာမှာ ထားတာပါ။ hot နရောလောကျ Covid ရောဂါ သံသယ မရှိလို့ ထားတာာပါ။”
မေး။ ။“ဒီ hot နရောကို လူနာတှကေို ပို့ပွီ ဆိုရငျ ဒီလူနာတှကေို ပထမဆုံး ဘယျလိုစပွီး ကုပေးပါသလဲ။”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“လူနာရောကျလာပွီ ဆိုတာနဲ့ - အရမျး ရောဂါ အခွနေဆေိုးနတေယျ၊ ဥပမာ- အောကျဆီဂငျြအရမျး နဲနတေယျ၊ အသကျရှု တအား ကွပျနတေယျဆိုရငျ ကမြတို့က ကွိုသိပါတယျ။ ambulance သမားက red phone လို့ချေါပါတယျ။ အရေးပျေါဖုံး emergency phone ပေါ့နျော။ လှမျးချေါတာပေါ့။ ချေါပွီးတော့ သူတို့က ဘာတှေ ဖွဈနတေယျ ဆိုတာပွောပါတယျ။ သှေးဖိအားတို့ နှလုံးခုနျနှုနျးတို့ အောကျဆီဂငျြ အခွနေေ တို့ကို ပွောပွလို့ ရှိရငျ ကမြတို့က ကဲ အဲဒီလူနာက တျောတျော ဆိုးနတေယျ။ အသဲအသနျ နရောမှာ ကွညျ့မယျပေါ့နျော။ အဲဒါဆိုရငျ resuscitation area လို့ ချေါပါတယျ။ အသဲအသနျ မဟုတျတဲ့လူတှကေိုတော့ ပုံမှနျ hot ဧရိယာမှာ ပဲ ကွညျ့တာပေါ့။
ကမြတို့ကတော့ လူနာစပွီး ရောကျကတညျးက သှေးဖေါကျတယျ၊ chest x-ray ရငျပတျကို ဓါတျမှနျရိုကျတယျ၊ ပုံမှနျရိုကျပါတယျ။ လူနာက blood test သှေးစဈတာတှေ၊ ရငျပတျ အိပျစရေးရိုကျတာတှကေ ကောငျးတယျ၊ အောကျဆီဂငျြ level က ကောငျးတယျ ဆိုလို့ရှိရငျ antibiotic ပေးပွီး ပွနျလှတျပါတယျ။ မကောငျးဘူး ဆိုလို့ရှိရငျတော့ ဆေးရုံမှာတငျပါတယျ။ ဆေးရုံ တငျရငျတော့ medical team ဆေးကုသရေး အဖှဲ့ကိုပဲ လှဲလိုကျတာပေါ့။ တနျးပွီးတော့။ သူတို့ medical ward က ကိုဗဈ ward လို့ ချေါပါတယျ။ အဲဒီလို မသှားခငျမှာ swab ယူပါတယျ။ နှာခေါငျးနဲ့ ပါးစပျထဲကို swab ယူပါတယျ။”
မေး။. ။“လူနာတယောကျ ရောကျလာပွီဆိုရငျ ဒီလူနာဟာ ကိုဗဈရောဂါ ဖွဈနလေား မဖွဈဖူးလား ဘယျလိုလုပျ သိပါသလဲ”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“အတိအကြ ဘယျလိုမှ မသိနိုငျသေးပါဘူး။ swab အဖွမေထှကျမခငျြး။ အခုတော့ ကမြတို့ သိနိုငျတာ တခုကတော့ လူနာ ရောကျရောကျခငျြး chest x-ray ဓါတျမှနျ ရိုကျလိုကျလို့ ရှိရငျ chest x-ray မှာ ပွတဲ့ လက်ခဏာတှကေ Covid sign လို့ ချေါပါတယျ။ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ကမြတို့ သိပါတယျ။ ကမြတို့ ဆေးရုံမှာ radiologist ဓါတျရောငျခွညျဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူက ၂၄ နာရီ ဂြူတီနဲ့ ဆငျးရပါတယျ။ radiologist က chest x-ray ကို ဖတျပွီး အခွနေကေို ပွောပွပါတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီ chest x-ray ကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျ ကမြတို့ လူနာနဲ့ ပတျသကျပွီး တျောတျောကို မှနျးလို့ ရနပေါပွီ။ နောကျပွီးတော့ သှေးအဖွေ blood result ပျေါမှာလညျး မူတညျပါတယျ။”
မေး။. ။“ သှေးအဖွပေျေါမှာ ဘယျလို မူတညျတာပါလဲ။”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“အဲဒီ သှေးအဖွမှော abnormalities မူမမှနျတာတှကေို ပွပါတယျ။ အဲဒီ ကိုဗဈရှိတဲ့လူနာက။. Lymphopenia လို့ ချေါပါတယျ။ blood count က နဲလို့ရှိရငျ အဲဒါက ကိုဗဈဖွဈဖို့ chance အခှငျ့လနျး အရမျးမြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခု အခြိနျမှာတော့ ဘယျသူပဲ ဖွဈဖွဈ ခြောငျးဆိုးနတေယျ၊ အပူခြိနျရှိနတေယျ၊ အသကျရှုကွပျနတေယျ ဆိုလို့ရှိရငျတော့ ၉ ဝ% ကြျောကတော့ ကိုဗဈပါပဲ။ chest x-ray က ကမြတို့ဆီမှာ ၅ မိနဈအတှငျး အဖွရေပါတယျ။ chest x-ray ကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျ ရောဂါအဖွရှောလို့ ရပါပွီ။”
မေး။. ။“ဒီကိုဗဈလူနာ သခြောပွီ ဆိုရငျ ဘာဆကျလုပျပါသလဲ။”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“လူနာက အောကျဆီဂငျြ လိုနကွေတာမြားပါတယျ။ အဲဒီတော့ အောကျဆီဂငျြလိုရငျ အောကျဆီဂငျြ ပေးတယျပေါ့နျော။ ပွနျနိုငျတဲ့ လူနာကိုတော့ antibiotic ပေးပွီးတော့ မပွနျနိုငျတဲ့လူနာကိုတော့၊ ဒီလူနာဟာ အထူးကွပျမတျဆောငျ intensive care ကိုသှားရမယျ့ လူနာလား၊ ရိုးရိုး medical ward ထဲမှာပဲ နနေိုငျသလား၊ ဆိုတာ အဲဒီအခြိနျမှာ ဆုံးဖွတျရပါတယျ။ ခုနကပွောပွတဲ့ resuscitation ခနျးထဲမှာရှိနတေဲ့ လူနာကတော့ အရမျးကိုဆိုးဝါး နတေယျဆိုရငျ အသကျရှုစကျ တပျမလား ဆိုတာကို ဆုံးဖွတျရ ပါတယျ။ အဲဒီအခါ ကလြို့ရှိရငျ ကမြတို့က Intensive Care Specialists (ICU) တှကေို ချေါပါတယျ။ သူတို့က လာကွညျ့တယျ။ သူတို့ ဆုံးဖွတျပါတယျ။ သူတို့ decide လုပျ ဆုံးဖွတျခကျြခတြဲ့ နရောမှာ သူတုိ့ကွညျ့ရတဲ့ factors အကွောငျးခကျြတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒီပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ လညျခြောငျးထဲကို ပိုကျ tube ထညျ့မလား။ အသကျရှုစကျနဲ့ ဆကျမလား ဆိုတာကို ICU က အထူးကု specialists တှကေ ဆုံးဖွတျပွီးတော့ သူတို့ လုပျပါတယျ။ တခါထဲပေါ့နျော။”
မေး။. ။“ကိုယျ့ကိုယျကိုသံသယဖွဈနတေယျ၊ ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါ အကူးခံနရေတယျလို့ သံသယရှိရငျ ဘာတှေ လုပျရမလဲ။”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“ကမြတို့ဆီမှာ 111 ဆိုတဲ့ စံနဈရှိပါတယျ။ အဲဒါက health advise line ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အကွံပေးတဲ့ ဖုံးလိုငျးပေါ့နျော၊ အဲဒီလိုငျးမှာ ဖွတေဲ့လူတှကေ ကနျြးမာရေးကုသမှု ဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူတှေ healthcare professional တှပေေါ့။ မြားသောအားဖွငျ့ သူနာပွုတှေ၊ nurse တှေ၊ paramedic တှေ သူတို့ကို သငျတနျးပေးလကေ့ငျြ့ train လုပျထားတာပေါ့။ အဲဒီနံပတျကို ချေါလိုကျရငျ သူတို့က symptoms တှေ၊ ဖွဈနတေဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေို မေးပါတယျ။ အကုနျလုံးပေါ့။ အရငျက ဘာရောဂါဖွဈဖူးတယျ medical history က အစ၊ ဘာဆေးတှသေောကျဖူးတယျ၊ drug history ကအစ သူတို့မေးရမယျ့ checklist အခကျြတှေ အမြားကွီးပါ။ အဲဒါတှကေို မေးပါတယျ။ မေးပွီးတော့ သူတို့ဆုံးဖွတျနိုငျတဲ့ ကိစ်စဆိုရငျ သူတို့ဖာသာ ဆုံးဖွတျတယျ။ မဆုံးဖွတျနိုငျရငျလညျး ခဏနရေငျ ဆေးတာဝနျခံက ပွနျချေါပါလိမျ့မယျ ဆိုပွီးတော့ ပွောပါတယျ။ အဲဒါက GP (General Physician) အထှထှေရေောဂါကု ဆရာဝနျ ဖွဈတာမြားတယျ။ သူကပွနျချေါတယျ။ အဲဒီမှာ GP ဆရာဝနျက ဆုံးဖွတျလိုကျတာပေါ့။ နကေောငျးရငျတော့ အိမျမှာပဲ နအေုံးပေါ့နျော၊ ပါရာစီတမော သောကျပါ၊ ရမြေားမြား သောကျပါ၊ ဘာတှလေုပျရမယျဆိုတာ၊ ဘယျ sign တှေ၊ symptom တှေ၊ လက်ခဏာတှေ ကွညျ့ နရေမယျ၊ ဘယျအခြိနျမှာ နမေကောငျးရငျ 999 ချေါရမယျ ဆိုတာ သူတို့က ညှနျကွားပေးတာပေါ့။ အဲဒီလို ဆရာဝနျနဲ့ စကား ပွောနတေဲ့ အခြိနျမှာ မကောငျးဘူးလို့ ထငျရငျတော့ ဆရာဝနျက ခကျြခငျြး လူနာတငျယာဉျ ambulance လှတျလိုကျပါတယျ။”
မေး။ ။“အခုပွောတဲ့ 111 နဲ့ 999 ဘာကှာပါလဲ”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“ 111 က non-emergency call ပေါ့နျော။ ဥပမာ လူတယောကျက အခုလိုအခြိနျမှာ အပူခြိနျရှိနတေယျပေါ့နျော။ လညျခြောငျးနာတယျ၊ ခြောငျးဆိုးတယျဆိုလို့ရှိရငျ သူ့မှာ အသကျအန်တရာယျ ရှိနတေဲ့ အခြိနျမဟုတျလို့ရှိရငျ 111 ကိုချေါလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဥပမာ လူတယောကျက အရမျးကို ရငျဘတျအောငျ့တယျပေါ့နျော၊ နှလုံးရောဂါကွောငျ့ heart attack ရတယျလို့ ထငျလို့ရှိရငျ အဲဒီလူနာ 999 ကိုချေါလို့ ရပါတယျ။ 999 က emergency အရေးပျေါပေါ့။ အဲဒီ 999 call က ၃ ခုပွနျခှဲပါတယျ။ police လိုခငျြလား။ ambulance လိုခငျြလား၊ မီးသတျလား အဲလို ထပျခှဲပါတယျ။”
မေး။. ။“အရေးပျေါအခနျးတှကေို ကိုငျရတဲ့ ဆရာဝနျတှေ အနနေဲ့ ရောဂါမကူးအောငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျလိုကာကှယျတာတှေ လုပျပါသလဲ။”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“hot area မှာလာတဲ့ လူတှကေတော့ အကုနျလုံးနီးပါးက နောကျကလြို့ရှိရငျ positive ဖွဈတာကိုး။ အဲဒီတော့ အကုနျလုံး full PPE ဝတျရပါတယျ။ မကျြစိပိုငျးကိုကာတဲ့ မကျြမှနျ google ရယျ၊ နှာခေါငျးစညျး mask က FFP3mask လို့ ချေါပါတယျ။ ပွီးတော့ surgical gown ခှဲစိတျခနျးသုံး ဝတျရုံနဲ့ gloves လကျအိတျ ဝတျရပါတယျ။ အပျေါမှာ visor မကျြနှာအကာ တပျပါတယျ။”
မေး။. ။“မွနျမာနိုငျငံက လူတှေ ကိုဗဈနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာတှေ သတိထားသငျ့ပါသလဲ”
ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး။ ။“မပေါ့ကွဖို့လိုပါတယျ။ ဒီရောဂါ ကူးပုံက fomites လို့ ချေါပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျမှာ ပါလာတာကိုး။ ကိုယျအပွငျထှကျလေ၊ ကိုယျ့အိမျကို သယျလာလပေဲ။ အဲဒီတော့ တတျနိုငျသမြှ အိမျမှာ နကွေဖို့၊ လူကွီးတှနေဲ့ ကိုယျခံအားနဲတဲ့ လူတှေ ဥပမာ ဆီးခြို ရှိတဲ့လူတှေ၊ နှလုံးရောဂါ အဆုတျရောဂါ၊ ပနျးနာရငျကွပျ ရှိတဲ့လူတှေ၊ ကငျဆာရှိတဲ့လူတှကေ အိမျထဲမှာပဲ နေ၊ လုံးဝ အပွငျကို ထှကျကို မထှကျသငျ့ပါဘူး။ အိမျသားတှကေလညျး လုံးဝ မထှကျသငျ့ပါဘူး။ လူထူတဲ့ နရောကို မသှားတာဟာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ဗွိတိနျက ဆေးရုံ အရေးပျေါဌာနမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ ဒေါကျတာအလိမ်မာဝငျးသိနျး ပါ။